တောင်ကြီးမြို့နယ်မှာ အကြမ်းဖက် အဖွဲ့တွေနဲ့ ဆက်စပ်တယ် ဆိုပြီး အဖမ်းခံထားရတဲ့ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် အယောက် ၂၀ ဘက်က ရှေ့နေလိုက်ပေးနေတဲ့ တရားလွှတ်တော် ရှေ့နေ ဒေါ်ခင်မိုးမိုး | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« စစ်ပွဲအတွက် အမုန်းတရား လှုံ့ဆော်သူများ
“မြို့တော်ရန်ကုန်” ၄င်းဒေသအတွင်းသို့ တပ်မတော်သားများ လက်နက်ကိုင်ဖို့ ဝေးလို့ ယူနီဖောင်းဝတ်၍ပင် မ၀င်ရ။ ” Roman General and army cannot cross the Rubicon »
တောင်ကြီးမြို့နယ်မှာ အကြမ်းဖက် အဖွဲ့တွေနဲ့ ဆက်စပ်တယ် ဆိုပြီး အဖမ်းခံထားရတဲ့ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် အယောက် ၂၀ ဘက်က ရှေ့နေလိုက်ပေးနေတဲ့ တရားလွှတ်တော် ရှေ့နေ ဒေါ်ခင်မိုးမိုး
ဩဂုတ်လဆန်းပိုင်းက တောင်ကြီးမြို့နယ်မှာ အကြမ်းဖက် အဖွဲ့တွေနဲ့ ဆက်စပ်တယ် ဆိုပြီး အဖမ်းခံထားရတဲ့ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် အယောက် ၂၀ ကို ဒီကနေ့ တောင်ကြီး ခရိုင် တရားရုံးမှာ ရုံးထုတ် စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။
ဒီအမှုကို ခုရက်ပိုင်းမှာ တစ်ပတ် ၂ကြိမ် ရုံးထုတ် စစ်ဆေးနေသလို အမှုလိုက်ပေးနေတဲ့ ရှေ့နေတွေကို အင်အားပြ ခြိမ်းခြောက်တာတွေ လုပ်နေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ ရှိနေတယ်လို့လည်း ရှေ့နေတွေက ပြောပါတယ်။
ဒီအမှု စစ်ဆေးနေတဲ့ အခြေအနေကို သိနိုင်ဖို့ တရားခံလို့ စွပ်စွဲခံထားရသူတွေဘက်က ရှေ့နေလိုက်ပေးနေတဲ့ တရားလွှတ်တော် ရှေ့နေ ဒေါ်ခင်မိုးမိုးကို ဘီဘီစီ သတင်းထောက် ကိုနေလင်းက ဆက်သွယ် မေးမြန်း ပြီး သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။
This entry was posted on December 9, 2014 at 9:44 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
One Response to “တောင်ကြီးမြို့နယ်မှာ အကြမ်းဖက် အဖွဲ့တွေနဲ့ ဆက်စပ်တယ် ဆိုပြီး အဖမ်းခံထားရတဲ့ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် အယောက် ၂၀ ဘက်က ရှေ့နေလိုက်ပေးနေတဲ့ တရားလွှတ်တော် ရှေ့နေ ဒေါ်ခင်မိုးမိုး”
drkokogyi Says:	December 10, 2014 at 5:04 am | Reply Al Khon Bransai
အင်မတန် လက်လွတ်စပယ် ပြုကျင့်နေတဲ့ ဥပဒေ နှင့် အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်ဝါဒီများ
(အမှန်တရားဘက်မှ ရပ်တည်သော NLD ဥက္ကဌကိုပါ ထိခိုက် စော်ကားလျှက်ရှိ )
မွတ်ဆလင် သတို့သား သတို့သမီးအပါအ၀င် မင်္ဂလာပွဲသွားရင်း ဖမ်းဆီးတရားစွဲခံရသူတွေရဲ့ အမှုကို လိုက်ပါတဲ့အတွက် အပုပ်ချခြိမ်းခြောက်မှုတွေ ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ကြီးမြို့က ရှေ့နေ ဒေါ်ခင်မိုးမိုးက ဒီဗွီဘီကို ပြောပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၄ လခန့်က ကွန်ဟိန်းမြို့မှာ မင်္ဂလာဆောင်သွားတဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် အဖွဲတဖွဲ့ကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့နဲ့ ဆက်စပ်တယ်လို့ အထောက်အထားမဲ့ စွတ်စွဲပြီး စစ်တပ်က ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ် ။
ဖမ်းဆီးခံရသူတွေဟာ တောင်ကြီးမြို့မှာနေထိုင်သူ ၆ ဦးပါဝင်ပြီး ကျန်သူတွေကတော့
ကျောက်ဆည်မြို့နယ် လက်ပံရွာသားတွေအပါအ၀င် အားလုံး ၁၄ ဦးပါဝင်ပါတယ်။
ဒီနောက် သတို့သမီးနဲ့ သတို့သားအပါအ၀င် ၆ ဦး ထပ်မံဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး သူတို့တတွေကို
လက်နက်တစုံတရာနဲ့ တိုင်းပြည်ဆူအောင်လုပ်ဆောင်မှုပုဒ်မ ၅ (ဋ္ဌ) နဲ့ ပြည်ထောင်စု
ငြိမ်ဝပ်ပိပြားရေးကို ထိခိုက်အောင်လုပ်ဆောင်မှု ပုဒ်မ ၅(ည) တွေ နဲ့ တရားစွဲ ပြီး
မွတ်ဆလင်တွေဘက်က ရှေ့နေလိုက်လို့ တိုက်ခိုက်ခြိမ်းခြောက်မှုတွေ
ရင်ဆိုင်ရတယ်လို့ တောင်ကြီးမြို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်တဲ့ ရှေ့နေ ဒေါ်ခင်မိုးမိုး က ပြောပါတယ်။
“ ရုံးချိန်းရှိတဲ့နေ့မှာ တရားရုံးရှေ့မှာ ဘုန်းကြီးတွေလာတယ်။ ရှေ့ပိုင်းတုန်းကဆိုရင် စာရွက်တွေပါဝေတယ်။
နောက်တခါ စွမ်းအားရှင်အဖွဲ့တွေကလည်း ရုံးချိန်းမှာဆိုရင် ရုံးရှေ့လာပြီး တော့ ဒီအမှုက မိသားစုတွေကို ရန်စချင်တာမျိုးတွေ၊ ဒီ ဖေ့ဘုတ်တွေမှာတော့ ပေါ်ပေါ်တင်တင်ကို အပုပ်ချတာတွေ လုပ်နေတယ်။
ဒီ ဒီဇင်ဘာအကုန်မှာ ဒီအမှုက လုံးဝ ပြီးသွားတော့မှာ အဲဒီအချိန်မှာက တရားမျှတမှုမရအောင် သူတို့တွေက တရားရုံးကို စောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။
ဒီအမှုမှာ ပြစ်ဒဏ်နည်းရင်တော့ ငါတို့က ဆူမှာပဲဆိုပြီး စာတွေပို့တာတွေလည်း ရှိတယ်။ ”
( ဒီနေရာမှာ … လက်ရှိ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ အမှုဟာ အစိုးရနဲ့ ဖြစ်တဲ့ ပြစ်မှုပါ … အကြမ်းဖက်လို့ မတရားစွတ်စွဲထားတာပဲ ရှိပါတယ် ။ သက်သေအထောက်အထားလည်း ခိုင်လုံခြင်း မရှိပါဘူး …။
ဒီလိုကိစ္စမှာ ဘာဖြစ်လို့ ဘုန်းကြီး ၊ စွမ်းအားရှင်တွေက ၀င်ပါလာကြသလဲ ဆိုတာ မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်နေပါတယ် …။ ဘာဆိုင်လို့လဲ … ဒါ ဘာသာရေးနဲ့လည်း မဆိုင်ဘူး … အကြမ်းဖက် ဖြစ်ခဲ့သည့်တိုင်အောင် … တရားဥပဒေဘောင်အတွင်းကပဲ
သွားရမယ် ။ ဘာမှ ၀င်စွက်ဖက်စရာ မလိုပါဘူး … ဗုဒ္ဓအကြမ်းဖက်တွေ တရားဝင် လှုံ့ဆော်နေတဲ့ ဥူးဝီရသူတို့ နေမျိုးဝေ တို့တော့လွှတ်ထားပြီး မတရားသဖြင့် ကျလွန်းနေပါတယ် ) ( ဤကား စကားချပ် )
တောင်ကြီးခရိုင်တရားရုံးမှာ အပတ်စဉ် တနင်္လာနေ့နဲ့ ကြာသာပတေးနေ့တွေမှာ စစ်ဆေးနေ ပါတယ်။
တောင်ကြီးမြို့မရဲစခန်းကတော့ ဒီအမှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး လူစုလူဝေးလည်းမရှိသလို အားလုံးကတော့ အေးအေးချမ်းချမ်းပဲလို့ ပြောပါတယ်။
တရားစွဲဆိုခံရတဲ့ တောင်ကြီးမြို့ခံတဦးရဲ့ အမည်မဖော်လိုသူ ဖခင်ကတော့ အာဏာပိုင်တွေဟာ သားကို စဖမ်းသွားကတည်းက ဘယ်မှာထားတယ်ဆိုတာ မပြောဘဲ ထောင်ရမန်ယူတဲ့အချိန် တလကြာမြင့်မှ သားနဲ့ တွေ့ခွင့်ရတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ခက်ခက်ခဲခဲ ရှာဖွေရတယ်လို့ သူက ပြောပါတယ်။
“တွေ့တော့ ကလေးတွေက ငိုကြတာပေါ့ဗျာ။ သူတို့ကို ရှေ့နေငှားပေးပါ သိပ်ဒုက္ခ ရောက်တာပေါ့။
ကျနော်လည်း ရှေ့နေငှားတယ် ဒါပေမယ့် ရှေ့နေတွေက မလိုက်ရဲကြဘူး ဗျာ။ ဘယ်သူ့မှမလိုက်ရဲတော့ ကျနော်က မဖြစ်ဖြစ်အောင်တော့ ဒေါ်ခင်မိုးမိုးကို သွားပြီး အကူအညီတောင်းရတာပေါ့။
ဘယ်သူကမှလည်း မလိုက်ရဲကြဘူးဆိုတော့ ဒေါ်ခင်မိုးမိုးက လိုက်ပေးပါတယ်။”
ဒါ့အပြင် တရားလိုထွက်ဆိုချက်အရ ဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေဟာ ပြစ်ချက်မရှိတဲ့အတွက်
လွှတ်ပေးဖို့လည်း ဒေါ်ခင်မိုးမိုးက တောင်းဆိုထားပါတယ်။
“အမှန်ကတော့ သူတို့ ပြစ်ချက်ကလည်း မရှိဘူးဗျာ။ ဗိုလ်ကြီးဇေယျာလင်းဆိုတာ တရား လိုပေါ့ဗျာ။
သူ့ရဲ့ထွက်ဆိုချက်ထဲမှာလည်း ဘာစာရွက်စာတန်းမှလည်း မမိဘူး။ ဘာလက်နက် ပစ္စည်းမှလည်း မမိခဲ့ဘူး။
ဆိုတော့ ဒီကလေးတွေမှာ အပြစ်မရှိဘဲ ဒီလိုပုဒ်မကြီး တပ်ထားတာ လည်း မသင့်လျော်ဘူးပေါ့ဗျား။
ပုဒ်မကို ပြန်ပြောင်းရင်လည်းပြောင်း မပြောင်းရင်လည်း လွတ်ပေးပေါ့ ကလေးတွေက အပြစ်မှ မရှိဘဲ။”
မင်္ဂလာဆောင်ကို အကြောင်းပြုပြီး လူ ၂၀ က အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ အစည်းတွေနဲ့ ဆက်သွယ်မယ်ဆိုတဲ့ သံသယနဲ့ ဖမ်းဆီး တရားစွဲခံနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။
via Marmu Saeed Moh